Dani Carvajal oo seegaya Euro 2016…(Yaa galaya booskiisa?) – Gool FM
Dani Carvajal oo seegaya Euro 2016…(Yaa galaya booskiisa?)
Byare May 30, 2016
(Madrid) 30 Maajo 2016. Real Madrid ayaa xaqiijisay in daafaceeda garabka midig ee Dani Carvajal uu la dhibtoonayo dhaawac muruqa ah isla markaana uu seegi doono Euro 2016 oo dhawaan ka furmi doona dalka Faransiiska.
Daafaca reer Spain ayaa waxa uu dhaawaca ka soo gaaray ciyaartii finalka Champions League ay kooxdiisu rigoorooyinka uga qaaday Atletico Madrid iyadoo uuna garoonka ka baxay isagoo ilmeenaya daqiiqadii 52-aad.
Tijaabooyin la marsiiyay maanta oo isniin ah ayay kooxda warbixin ay ka soo saartay ku xaqiijisay inuu laacibku qabo dhaawac muruqa ah.
Sikastaba, arrinkan ayay waxay albaabada u fureysaa daafaca birta ah ee kooxda Arsenal Hector Bellerin oo markii horeba si lama filaan ah looga soo tagay inkastoo heegan la galiyay in xulka dib loogaga yeeri karo marka ay xaaladahan oo kale soo baxaan.
KOOXDA RIYADA: Ka bogo kooxda riyada ee Franco Baresi
"Diyaar ayaan u ahay inaan buuxiyo booska Dani Carvajal" - Hector Bellerin